I-Adsorption Inkcazo (iKhemistry)
I-Adsorption ichazwa njengento yokubambelela kweentlobo zeekhemikhali kwi-particles. I-physicist yeJamani uHeinrich Kayser waqulunqa igama elithi "adsorption" ngowe-1881. I-Adsorption yinkqubo eyahlukileyo ukusuka ekutyaleni , apho into eyenziwa yintsimbi okanye iqinile ukuze isisombululo .
Kwi-adsorption, i-gesi okanye i-particle liquid ibophezela kummandla oqinileyo okanye omanzi obizwa ngokuba yi- adsorbent . Iingqungquthela zenza ifilimu ye-atomic okanye i-molecule ye- adsorbate .
Iisotherms zisetyenziselwa ukuchaza i-adsorption kuba iqondo lokushisa linomphumo omkhulu kwinkqubo. Ubungakanani be-adsorbate eboshwe kwi-adsorbent buboniswa njengomsebenzi woxinzelelo lwengxinano kwiqondo lokushisa. Iimodeli ezininzi eziye zaphuhliswa ukuba zichaze i-adsorption, kubandakanywa i-linear, i-Freundlich, i-Langmuir, i-BET (emva kweBrunauer, i-Emmett, ne-Teller), kunye ne-Kisliuk theories.
IUPAC Inkcazelo ye-Adsorption
Inkcazelo ye-IUPAC ye-adsorption yiyo " Ukwandiswa kwenkxalabo yezinto ezisetyenziswayo kwi-interface yolwakhiwo kunye nolwakhiwo lwamanzi okanye olushushu olushushu ngenxa yokusebenza kwamandla omhlaba ."
Imizekelo yeentengiso zibandakanya:
i-carbon okanye ilahle
i-adsorption chillers ezisetyenziselwa iziqhumiso
ii-biomaterials ezithengisa iiprotheni
I-Adsorption yinqanaba lokuqala lomjikelezo wobomi beentsholongwane. Ezinye izazinzulu zijonga umdlalo wevidiyo uTetris umzekelo wenkqubo yokukhangisa iimolekyuli ezibunjiweyo kwiindawo eziphambili.
I-Adsorption yimbonakalo yomhlaba apho iinqununu okanye i-molecule zibophelela kwinqanaba eliphezulu. Ukunyuselwa kwamanye amazwe, ngakwelinye icala, kuhamba ngokujulile, kubandakanya umthamo wonke we-absorbent. Ukunyuselwa kwamanzi kukuzaliswa kwezibonda okanye izimbobo kwizinto.
Imigaqo ehambelanayo ne-Adsorption
Uhlobo : Olu luquka iinkqubo zombini zokukhangisa kunye nokunyusa.
I-Desorption : Inkqubo echasayo yokukhupha. Ukutshintshwa kwe-adsorption okanye ukutshatyalaliswa.
Ngokuqhelekileyo, ii-adsorbents zinamadamitha amancinci amancinci ukwenzela ukuba kukho indawo ephezulu ukulungiselela ukukhangisa. Ubunzima bepore buhlala buphakathi kwe-0.25 no-5 mm. Izibhengezo zoshishino zinokuzinza okuphezulu kunye nokumelana nokuxhatshazwa. Ngokuxhomekeke kwisicelo, ummandla unokuba yi-hydrophobic okanye i-hydrophilic. Izibhengezo zombini kunye neentengiso ezingekho. Ii-adsorbents ziza kwiimeko ezininzi, kubandakanywa iintonga, iipeliti, kunye nemilo ebunjiweyo. Kukho ezintathu iiklasi eziphambili zezibhengezo zentengiso:
izixhobo ezisusela kwikhabhoni (umzekelo, igraphite, i-charcoal)
i-oxygen-based compounds (umzekelo, i-zeolite, i-silica)
I-Adsorption isebenza njani
I-Adsorption ixhomekeke kumandla omhlaba. Ii-atom eziphezulu ze-adsorbent zibonakaliswe ngokukodwa ukuze zitsalise iamolekyu ze-adsorbate. I-Adsorption ingabangela ukukhanga kwe-electrostatic, i-chemisorption, okanye i-physisorption.
Zininzi izicelo zeenkqubo zokukhangisa, kuquka:
I-Adsorption isetyenziselwa ukupholisa amanzi kumagumbi okuma umoya.
Ukusetyenziswa kwelahleko kusetyenziswa ukuhlanjululwa kwe-aquarium kunye nokucoca kwamanzi asekhaya.
I-gelisi ye-silica isetyenziselwa ukuthintela umswakama ukuba ungonakalise i-electronics kunye nezambatho.
I-Adsorbents isetyenziselwa ukwandisa umthamo wee-carbide ezivela kwi-carbide.
I-Adsorbents isetyenziselwa ukuvelisa izambatho ezingenamathela kwiindawo.
I-Adsorption ingasetyenziselwa ukwandisa ixesha lokuchasana kwezidakamizwa ezithile.
I-Zeolites isetyenziselwa ukususa i-carbon dioxide kwi-gesi yendalo, isuse i-carbon monoxide ekuguquleni i-gas, ukuchithwa kwe-catalytic kunye nezinye iinkqubo.
Inkqubo isetyenziselwa i-chemistry labs ye-ion exchange exchange kunye ne-chromatography.
I-Glossary ngokwemimiselo yamakhemikhali (i-Recommendations 1990) ".
Ferrari, L .; Kaufmann, J .; Winnefeld, F .; Iplank, J. (2010). "Ukusebenzisana kwemimodeli yemodeli kunye nama-superplasticizers aphenywe yi-atomic force microscopy, i-zeta, kunye ne-adsorption measure". J Colloid Interface Sci. 347 (1): 15-24.
I-Steam Distillation Inkcazo kunye neMigaqo kwiKhemistry
Yintoni iVirga Inciphiso?
Udlala njani i-Strip Poker
Cherchez la Femme - Uninzi lwentlobano yesini yeFrench
Ukukhetha i-DNA Testing Inkampani
Indlela i-Jazz eyathintela ngayo i-Hip-Hop
Luhlobo luni lomsebenzi onokukwazi ukuba nalo kwiArchaeology?
Abafundi beKholeji abaninzi banokuthi babe ngamaxhoba okuQhwaba kunye neRansomware
Indlela yokucoca i-Hard Watercolor Tube Paint